IKildare Village - IntoKildare
Okuhamba phambili kweKildareUbumnandi BomndeniUkuhamba IzintabaGolfIzinto Zamahhala OngazenzaIzinsuku ezinethayoAmagugu AfihliweIMpumalanga Yasendulo Yase-IrelandImigwaqoCommunity
Isikhungo Sezobuciko Somfula
Ukuphishekela Izwe Lase-Abbeyfield Farm
Umzila kaSt Brigid
Imisebenzi Engcono Kakhulu Yangaphandle eKildare
Ukuhamba Okuyisikhombisa Kwe-Scenic eKildare
I-Gallop Ngokusebenzisa i-Heartland yase-Equestrian Ireland
I-Irish National Stud nezingadi zaseJapan
Bona Zonke Izinto Ofanele Uzenze
IGastro-PubsUkudlela OkuhleUkudlela KwangaphandleUmculo WokuphilaTea Wasemini
AmaPub & Impilo yasebusuku
VOTE: I-Pint Best yeGuinness kaKildare
Uhlu lwamabhakede wokudla neziphuzo olusekugcineni kweCo Coildare
Izindawo ezihamba phambili zokudlela ngaphandle eKildare
Izindawo ezihamba phambili zeBrunch zeKildare
Buza Endaweni: Sikuphi Isitolo Sekhofi Esikahle Kildare
Bona konke ukudla neziphuzo
Izinqaba Nezindlu ZomlandoUkunethezekaisabelomaliUmndeni FriendlyAmahhotela anamachibi okubhukudaAmahhotela e-SpaI-Pet FriendlyIzinkundla Zomshado
ICarton House, ihhotela eliphethwe iFairmont
Indawo yokulala nokulala kwasekuseni
I-Moate Lodge B&B
ILavender Cottage Ukuziphilisa
Indawo Engcono Kakhulu Yokuziphilisa e-Kildare
I-Carra Caravan & Ikamu
Bheka Yonke Indawo yokuhlala
Izinkathi zonyaka eKildare
Ifakwe ngaphakathi kwezindawo ezinhle ezihleliwe, iKildare Village iyindawo enhle yokuthenga okunethezeka, ihora nje ukusuka eDublin. Uzokuthola kunzima ukumelana nesilingo ngama-boutique ayi-100 avela kubadwebi abajabulisa kakhulu emhlabeni wonke anikela ngemali efinyelela kuma-60% entengo yokuthengisa enconyiwe.
IKildare Village ingenye yezindawo eziyi-11 zokuthenga zikanokusho eThe Bicester Village Shopping Collection kulo lonke elaseYurophu naseChina, konke okuyihora noma ngaphansi kweminye yemizi ehlonishwa kakhulu emhlabeni. Thola izindawo zokudlela ezidumile, insizakalo ye-concierge, ukwamukela izihambi ngezinkanyezi ezinhlanu nokonga okuphawulekayo.
IKildare Village iseduze neM7 Exit 13 ngaphansi kwehora ukusuka eDublin. Shayela futhi ujabulele ukupaka kwamahhala noma uthathe isitimela esiqondile semizuzu engu-35 sisuka isigamu sehora ukusuka eDeuton Station yaseDublin. Vakashela I-IrishRail.ie ukuthola eminye imininingwane ngezikhathi zesitimela nokunikezwa okukhethekile. Kusuka esiteshini sedolobha laseKildare hamba ngebhasi elihamba phambili laseKildare Village elihlangana nazo zonke izitimela izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Ibhasi le-shuttle lise-Irish National Stud Gardens naseHorse Museum eseduze kaningana ngosuku.
Shopping, Izinsuku ezinethayo, Amathilomu, Kildare
+ 353 045 520501
Umgwaqo uNurney, Isifunda iKildare, R51 R265, Ireland.
Vakashela iwebhusayithi ukuthola amahora wokuvula onyaka. Kuvaliwe Usuku Lukakhisimusi.
Umjikelezo Wonyaka WaseKildare
Silandele ukuthola ugqozi namathiphu avela kuKildare
IntoKildare © 2021 - Isiza ngo- Absolute | Inqubomgomo yobumfihlo
Thola zonke izindaba zakamuva, amathiphu, ukukhushulwa kanye nokunye
* Ngokusayina, uyavumelana nokwethu Inqubomgomo yobumfihlo nokwamukela ama-imeyili ethu
Lewebhusayithi isebenzisa amakhukhi ukuthuthukisa ulwazi lwakho. Sizocabanga ukuthi ulungile ngalokhu, kodwa ungakhetha ukuphuma uma ufisa.Yamukela Yenqaba Inqubomgomo yobumfihlo